Mari-nehupfumi, 29 Ndira 2019
Chipiri 29 Ndira 2019
Ndira 29, 2019
Zimbabwe Yodzika Mutemo weKukwezva veMabhizimisi Vekunze
Munyori mukuru wedare reparamende VaKennedy Chokuda vanoti vari kutarisira kuti bhiri reZimbabwe Investment Development Authority Bill rekukwezva vekunze sezviri kuitwa kuRwanda ringer ava mutemo mukati memavhiki matatu.
Vashandi veHurumende Voyambira Kuramwa Basa neChina
Hurukuro pakati pevamiririri vehurumende nemasangano anomiririra vashandi vehurumende nezuro dzakatadza kuwirirana panyaya yemihoro.
Ndira 23, 2019
Vashandi veHurumende Vanoti Vari Kuenderera Mberi neHurongwa hweKuramwa Mabasa
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavaita neChitatu, mutevedzeri wasachigaro weApex, VaThomas Muzondo, vati hapana chabuda muhurukuro dzavo nehurumende.
Muimbi Oliver Mtukudzi Ashaya
Muimbi ane mukurumbira munyika Oliver Tuku Mtukudzi ashaya muHarare nhasi kuchipatara cheAvenues Clinic.
Kuratidzira Kwokonzera Kutatarika Kwakanyanya Kune veMabhizimisi
Zvitoro zvakawanda munyika zvavhura nhasi mushure mekuvcharwa nemusi weMuvhuro apo pakatanga vanhu munyika kuratidzira vachiti havaifara nekuwedzerwa kwainge kwaitwa mafuta ekufambisa dzimotokari nemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa.
PTUZ Inoti Hurumende Yasarirwa neMazuva Matatu Chete Kuti Varairidzi Varamwe Mabasa
Rimwe sangano rinomiririra vadzidzisi, reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rayambira hurumende kuti yasarirwa nemazuva matatu chete kuti igadzirise zvichemo zvevarairidzi.